द्रुत उत्तर: माछा ट्याङ्कीबाट पानी वाष्पीकरण कसरी रोक्ने - BikeHike
घर » विविध » द्रुत उत्तर: माछा ट्याङ्कीबाट पानी वाष्पीकरण कसरी रोक्ने
म कसरी मेरो एक्वैरियमको पानीलाई वाष्पीकरणबाट रोक्न सक्छु?
माछा ट्याङ्कीमा पानी वाष्पीकरण हुन कति समय लाग्छ?
तपाईं माछा ट्यांक पानी कसरी स्थिर गर्नुहुन्छ?
मेरो माछा ट्याङ्की किन यति छिटो वाष्पीकरण भइरहेको छ?
किन मेरो माछा ट्याङ्कीले यति धेरै पानी गुमाउँछ?
के म मेरो माछा ट्यांकमा पानी थप्न सक्छु?
माछा ट्याङ्कीमा हुँदा म पानी कन्डिसनर थप्न सक्छु?
के मैले राती मेरो माछा ट्या tank्क छोप्नु पर्छ?
माछा ट्याङ्कीको तापक्रम कस्तो हुनुपर्छ?
माछाको ट्याङ्की सफा गरिसकेपछि त्यसमा कसरी पानी हाल्ने ?
माछा ट्याङ्कीमा पानीको स्तर कति माथि हुनुपर्छ?
मैले माछा ट्याङ्कीमा पानी कति पटक परिवर्तन गर्नुपर्छ?
म कसरी मेरो माछा ट्यांक स्वस्थ राख्न सक्छु?
तपाईंले पहिले पानी कहिले परिवर्तन गर्नुपर्छ?
के तपाईं एक्वैरियम पानी धेरै पटक परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ?
मेरो माछा ट्याङ्की खुसी छ भने मलाई कसरी थाहा हुन्छ?
ट्याङ्कीमा पानी कसरी प्रशोधन गर्नुहुन्छ?
माछाको लागि पानी कसरी उपचार गर्नुहुन्छ?
माछाको लागि ट्यापको पानी कत्तिको खराब छ?
कति पटक माछा खुवाउनु पर्छ?
थप माछा थप्नु अघि तपाईले कति समय पर्खनु पर्छ?
माछा ट्याङ्कीलाई चिसो राख्ने आफ्नो एक्वैरियमलाई घमाइलो झ्यालबाट टाढा राख्नुहोस् र यसलाई कोठाको चिसो भागमा राख्नुहोस्। वाष्पीकरणलाई न्यूनतम राख्नको लागि ट्याङ्कीको ढक्कन लिनुहोस्। यदि तपाईंले नयाँ ट्याङ्की सेटअप गर्दै हुनुहुन्छ भने, कम सतह क्षेत्र भएको एउटा छान्नुहोस्। LED जस्ता कम तातो प्रकाश प्रयोग गर्नुहोस् र ट्याङ्की बत्तीहरू सधैं नछोड्नुहोस्।
पानीको सतह माथिको हावामा आर्द्रता बढ्दै जाँदा हावाको चाल वाष्पीकरण सुस्त हुन्छ। यसैले तपाईको ट्यांकमा गिलासको ढक्कन थप्दा वाष्पीकरण दर कम हुन्छ। पानीको सतह र गिलासको ढक्कन बीचको बाष्प तहले वाष्पीकरण हुन गाह्रो बनाउँछ।
लगभग2ग्यालन पानीमा 10ppm (पार्ट्स प्रति मिलियन) को स्तरमा क्लोरीन पूर्ण रूपमा वाष्पीकरण हुन 110 घण्टा लाग्नेछ। यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि केहि अवस्थाहरू जस्तै पराबैंगनी प्रकाश, वातन, र उचित परिसंचरणले वाष्पीकरण प्रक्रियालाई गति दिन्छ।
सफा बाल्टीबाट कोठाको तापक्रमको पानीले तपाईंको ट्याङ्की लगभग एक तिहाइ भर्नुहोस्। बजरीमा बसेर थालीमा पानी खन्याएर बजरीलाई ठाउँमा राख्न मद्दत गर्छ। पानीलाई क्लोरिनेट गर्नको लागि Tetra® AquaSafe® Solution जस्ता पानी कन्डिसनर थप्नुहोस्। क्लोरीन तपाईंको लागि ठीक छ, तपाईंको माछा होइन!
माछा ट्यांक पानी वाष्पीकरण सामान्य छ; यद्यपि, त्यहाँ यसलाई ढिलो गर्ने तरिकाहरू छन्। तातो पानी वाष्पीकरणको मुख्य कारण हो, त्यसैले कम गर्मी, राम्रो। धेरै गर्मीले पानीलाई छिटो वाष्पीकरण मात्र बनाउँदैन, तर यसले तपाईंको माछाको मेटाबोलिज्मलाई पनि गति दिन्छ, ट्याङ्कीमा विषाक्त पदार्थहरू थप्छ र माछालाई बाहिर निकाल्छ।
तपाईंको एक्वैरियमको पानीको स्तर उतार-चढाव हुनेछ। पानीको स्तर घट्ने अधिकांश घटनाहरू वाष्पीकरण हुन्, सामान्यतया न्यानो मौसममा उच्च तापक्रमको कारणले गर्दा। यदि तपाइँसँग खुला शीर्ष एक्वैरियम छ भने गर्मीमा वाष्पीकरण ट्रे प्रयोग गरी पानीको कमी कम गर्न विचार गर्नुहोस्।
सफा बाल्टिन लगभग दुई तिहाइ देखि तीन चौथाई पानीले भर्नुहोस्। बिस्तारै बाल्टीबाट पानी एक्वैरियमको प्लेटमा हाल्नुहोस्। ट्याङ्की पानीले आधा भरिएको नभएसम्म छ र सात चरणहरू दोहोर्याउनुहोस्। बिरुवा र सजावट थप्नुहोस्।
यदि तपाईले पानीको सानो भाग मात्र हटाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा माछाको साथ पानीमा वाटर कन्डिसनर थप्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले पानीलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाईंले माछा थप्नु अघि पानीमा पानीको कन्डिसनर थप्नुपर्छ ताकि माछालाई क्लोरीन, क्लोरामाइन वा अमोनियाबाट विषाक्त हुनबाट बचाउन सकिन्छ।
यदि तपाईंसँग हाम फाल्ने माछाहरू छन् भने, यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाईंले आफ्नो ट्याङ्की छोप्नुहोस्, रातमा मात्र होइन तर दिनमा पनि। त्यो बाहेक, तपाईंको माछा ट्याङ्कीको लागि एक ढक्कन रातमा एक्वैरियम कोठा भित्र मात्र आवश्यक हुन्छ जहाँ परिवेशको तापक्रम पर्याप्त रूपमा पानी वाष्पीकरण गर्न पर्याप्त हुन सक्छ।
केहि चिसो पानी प्रजातिहरु को अपवाद संग, धेरै एक्वैरियम माछा को तातो पानी को आवश्यकता छ। बेट्टास, डिस्कस र केहि अन्य प्रजातिहरूले 76 डिग्री र 85 डिग्री फारेनहाइट बीचको पानीमा राम्रो गर्छन्, धेरैजसो अन्य उष्णकटिबंधीय माछाहरूले 75 डिग्री र 80 डिग्री फारेनहाइटको दायरा मन पराउँछन्, र सुनको माछाले 68 डिग्री देखि 74 डिग्री फारेनहाइट सम्म राम्रो गर्छ।
तपाईंले आफ्नो ट्याङ्की सफा गरिसकेपछि, तपाईंले ट्याङ्कीलाई नयाँ पानीले भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले ट्याङ्कीमा राख्नुभएको नयाँ पानीले कन्डिसनिङ ट्रीटमेन्ट प्रयोग गरेर पहिले नै क्लोरिन हटाइसकेको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। यो एक मात्र समय हो तपाईंले माछा ट्यांकमा पानी थप्नुपर्छ।
तपाईले सामान्यतया ट्याङ्कीलाई ट्रिमको तल एक इन्चसम्म भर्नुपर्छ किनभने पानीको स्तम्भ र वातन प्रणालीले सतह छिचोल्ने बबलहरू सिर्जना गर्नेछ। जब वाटरलाइन धेरै माथि छ, पानी ट्याङ्की बाहिर छिप्न सक्छ।
तपाईंले प्रत्येक दुई देखि चार हप्तामा 25% पानी परिवर्तन गर्नुपर्छ। पानी परिवर्तनको समयमा माछा हटाउन कुनै कारण छैन। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ बजरी हलचल वा पानी परिवर्तन को समयमा एक बजरी क्लीनर प्रयोग गर्नुहोस्। एक्वैरियममा पानी थप्दा, क्लोरीन र क्लोरामाइन हटाउन Tetra AquaSafe® को प्रयोग गर्नुहोस्।
एक स्वस्थ एक्वैरियम राख्नको लागि 10 मुख्य सुझावहरू तपाईंको पानीलाई ठीकसँग कन्डिशन गर्नुहोस्। तपाईंको माछालाई पानीमा मिलाउनुहोस्। तिनीहरूको झोलामा माछा फ्लोट गर्नुहोस्। पीएच सन्तुलन र अन्य रासायनिक स्तरहरू राख्नुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि पानीको तापमान सही छ। नियमित रूपमा पानी परिवर्तन गर्नुहोस्। ट्याङ्की गिलास र अन्य संरचनाहरू सफा गर्नुहोस्। आफ्नो ट्याङ्कीको लागि सही साइज छान्नुहोस्।
25 दिन पछि 15% पानी परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंको एक्वैरियममा थप्नु अघि एक्वेन वाटर कन्डिसनरको साथ ट्यापको पानीको उपचार गर्न सम्झनुहोस्। कति र कति पटक पानी परिवर्तन गर्ने भन्ने बारे विभिन्न दर्शनहरू छन्, तर प्रत्येक 10 देखि 25 हप्तामा 1% देखि 2% एक राम्रो नियम हो।
निष्कर्षमा, हो तपाईं धेरै पानी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ प्रति दिन 1 भन्दा बढी पानी परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको माछाले अनावश्यक तनाव अनुभव गर्नेछ। यो किनभने पानी मापदण्डहरू अस्थिर छन्। 50% भन्दा बढी पानी एकैचोटि कहिल्यै परिवर्तन नगर्नुहोस्, किनकि यसले एक्वैरियममा लाभकारी ब्याक्टेरियालाई मार्न सक्छ।
सामान्यतया, निम्न केही तरिकाहरू छन् जुन तपाइँ बताउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँको माछा खुसी छन्। तिनीहरू ट्याङ्कीको वरिपरि स्वतन्त्र रूपमा र ऊर्जावान रूपमा पौडी खेल्छन्। मानिसहरू जस्तै, खुसी माछाको छालामा जीवन्त चमक हुन सक्छ। उनीहरू ट्याङ्कीमा रहेका अन्य माछासँग डराउँदैनन्। उनीहरु सामान्य रुपमा सास फेरिरहेका छन् ।
यदि तलछट हलचल भएको छ भने, पानीलाई क्लोरीन र/वा उपभोग गर्नु अघि उमालेर रासायनिक रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था दुईवटा ट्याङ्कीहरू राख्नु हो र तिनीहरूलाई वैकल्पिक रूपमा सफा गर्नुहोस्। पानी उपचारका अन्य रूपहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै पराबैंगनी प्रकाश (UV) वा निस्पंदन द्वारा कीटाणुशोधन।
प्रत्येक हप्ता आफ्नो एक्वैरियम पानीको 10% वा प्रत्येक दुई हप्तामा 25% परिवर्तन गर्नुहोस्। प्रतिस्थापन पानी एक्वैरियम पानी जस्तै समान तापमान हुनुपर्छ। एक्वैरियममा थप्नु अघि क्लोरीन र अमोनियालाई बेअसर गर्नको लागि सधैँ ट्यापको पानीलाई वाटर कन्डिसनरसँग व्यवहार गर्नुहोस्। कम्तिमा महिनामा एक पटक फिल्टर कारतूस परिवर्तन गर्नुहोस्।
साधारण ट्यापको पानी एक्वैरियम भर्नको लागि ठीक छ जबसम्म तपाईले माछा थप्नु अघि धेरै दिनसम्म बस्न दिनुहुन्छ (ट्यापको पानीमा क्लोरिनले माछा मार्नेछ)। ट्यांकमा माछा थप्नु अघि फिल्टरलाई एक हप्तासम्म चलाउन दिनु राम्रो विचार हो।
धेरै जसो भागको लागि, तपाईंको माछालाई दिनमा एक वा दुई पटक खुवाउनु पर्याप्त छ। केही शौकहरूले आफ्नो पाचन प्रणाली सफा गर्न अनुमति दिन आफ्नो माछा हप्तामा एक वा दुई दिन उपवास बस्छन्। ठूला, अधिक आसीन माछाले खानाको बीचमा सानो, बढी सक्रिय माछा भन्दा लामो समयसम्म जान सक्छ।
तपाइँ सामान्यतया तपाइँको माछा ट्यांकमा नयाँ थपहरू प्रस्तुत गर्न को लागी कम्तिमा दुई हप्ता पर्खन चाहानुहुन्छ। यसले जैविक फिल्टरलाई फेरि समात्न समय दिन्छ। यस समयले नयाँ माछालाई माछा ट्याङ्कीमा प्रयोग गर्न र पुरानो, अधिक स्थापित माछाहरूलाई तपाईंको माछा ट्याङ्कीमा नयाँ थप्न प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रश्न: कसरी माछा ट्यांक पानी बाष्पीकरण रोक्न
माछा ट्याङ्की वाटर कन्डिसनरले ट्याङ्की पानीलाई मर्की बनाउन सक्छ
प्रश्न: कति पानी माछा ट्यांक परिवर्तन
कति पानी माछा ट्याङ्की परिवर्तन
माछा ट्यांक पानी कसरी उपचार गर्ने
माछा ट्याङ्की पानी कसरी खाली गर्ने
प्रश्न: माछा ट्यांक पानी कसरी फिल्टर गर्ने
द्रुत उत्तर: माछामा पानी ट्याङ्की हुन सक्छ
प्रश्न: तपाईं पानी सफ्टनर पानी माछा ट्यांक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
माछा ट्याङ्कीको लागि कति पानी कन्डिसनर
प्रश्न: कति Amoxicillin माछा ट्यांक एक्वैरियम पानी
माछा ट्याङ्कीको लागि कति पानी